नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको १ः१ हकप्रद माघ १३ गतेदेखि – Samabeshi Khabar
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको १ः१ हकप्रद माघ १३ गतेदेखि
२४ पुष २०७७, शुक्रबार ०८:१८ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, पुस २४ (ससं) । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले रु. १०० अंकित ६ लाख ५६ हजार १६९ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १ः१ अनुपातमा आगामी माघ १३ गतेदेखि उक्त हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । शेयर निष्कासन बन्द भने फागुन ३ गते बैंकिङ्ग समयपश्चात् हुनेछ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा पुस २८ गतेसम्म कारोबार भई कायम साविक शेयरधनीहरुले यो हक प्रद शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । आफ्नो कायम हकभन्दा बढी हकप्रद शेयरको लागि दरखास्त दिन पाईने छैन् । तर, साविक शेयरधनीले आफ्नो कायम हकभन्दा कम हकप्रद शेयर खरिद गर्न आवेदन दिन सक्नेछ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रु. ६ करोड ५६ लाख १६ हजार ९०० रहेको छ भने हकप्रदन निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेपश्चात् बैंकको चुक्तापूँजी रु. १३ करोड १२ लाख ३३ हजार ८०० पुग्नेछ । धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लिमिटेड रहेको छ ।